Starns na igbe igbe na ọnụahịa ahịa | Rayson
Isi ohiri elu
N'alụghị, eze na-alụbeghị, zuru, eze nwaanyị, eze
Oge opupu ihe ubi:
Akwụkwọ ikike nke mmiri:
Afọ 15 zuru oke
15,000 PCs kwa ọnwa
Flat na-agbakọta + pallet / kpọfere katọn / akpa
15 ụbọchị ọrụ maka ịme ihe nlele, ụbọchị 30 maka mmepụta ọrụ
Ọ na-agbasi mbọ ike mgbe niile, Rayson etolitela ịbụ onye na-achụ n'ụlọ ahịa na ndị ahịa. Anyị na-elekwasị anya n'ịdị ike nke sayensị na azụmaahịa ọrụ. Anyị edobela ngalaba ọrụ ndị ahịa ka ọ ka mma nye ndị ahịa na ọrụ ngwa ngwa gụnyere ọkwa nsuso. Storens na Foster igbe anyị na-ekwe nkwa na anyị na-enye ndị ahịa ọ bụla nwere ngwaahịa dị elu gụnyere nke na-abawanye na ọrụ Foster. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata nkọwa ndị ọzọ, obi dị anyị ụtọ ịgwa gị .it na-enye onye na-atụla ya ihe ụfọdụ. Ọ ga-eme ihe a na-echekwa n'etiti ahụ mmadụ na ihe ọkụkụ na-egbu egbu, na-apụta, ihe siri ike, wdg.